Thwebula HWMonitor 1.41 – Vessoft
Ikhasi elisemthethweni: HWMonitor
HWMonitor – a isofthiwe ukuqapha isimo izingxenye ezihlukahlukene computer. Isofthiwe ubonisa ukusebenza wamanje iprosesa, ihluzo ikhadi, drive kanzima, umbadlana kanye nezinye izingxenye nemishini eyakhelwe-in. HWMonitor uqaphe fan ijubane ukuzungeza, voltage lokushisa nezici izingxenye ezihlukahlukene computer. Isofthiwe ikuvumela ukubuka isimo yezingxenye computer by kombundu amagugu. Futhi HWMonitor ongafunda ulwazi mayelana transducer kanye inzwa ugesi amayunithi.
Izinkomba voltage lokushisa yezingxenye computer
Ibonisa ijubane fan ukuzungeza
Ubonisa amagugu embundwini umthwalo phezu izingxenye computer
Amazwana ku HWMonitor
HWMonitor software ehlobene
Le nsiza encane eyenzelwe ukubonisa ulwazi mayelana namadivayisi we-PCI efakwe kukhompyutha yomsebenzisi.
Isofthiwe ukulungisa amafasitela akhethiwe phezu kwamanye amawindi. Isofthiwe ikuvumela ukuba ukubukela izinhlelo ze-TV namafilimu nama-video ukusakazwa phezu amafasitela umkhankaso.
Le software iklanyelwe ukudweba usebenzisa isikhombisi segundane noma i-tablet yehluzo. Isofthiwe isekela umsebenzi emaqenjini amaningana futhi inquma amandla okucindezela ibrashi emgqeni.